BCN Support, Author at Business Centric Network (BCN)
Author: BCN Support
Sales Return @ MSMEBooks
June 14, 2020 June 14, 2020 BCN Support
MSME Books တွင် Customer များထံမှ ရောင်းထားသည့် ပစ္စည်းများ ပြန်လည်လက်ခံရရှိပါက.."Credit Note" ကို အသုံးပြု၍ ပြန်လည် လက်ခံနိုင်ပါသည်။ တန်ဖိုးတူ ပစ္စည်းများအား လဲလှယ်ရန်အတွက် "Credit Note" ထည့်သွင်းခြင်း "Customer" များအား ရောင်းချထားသည့် "Sales Invoice" မှ တန်ဖိုးတူပစ္စည်းများနှင့် လဲလှယ်ရန် "Sales Return" ပြန်လာပါက "Sales invoice" ကိုနှိပ်ပါ။ ကုန်ပစ္စည်းပြန်လည် လက်ခံမည့် "Sales Invoice" ကိုရွေးချယ်ပါ။ "View" ကိုနှိပ်ပါ။ "Copy to" ကိုနှိပ်ပါ။ "New Credit Note" ကိုနှိပ်ပါ။ "Item" တွင် ပြန်လည်လက်ခံမည့် ကုန်ပစ္စည်းများကိုသာ… Continue reading Sales Return @ MSMEBooks
Fixed Assets @ MSME Books
April 24, 2020 BCN Support
လုပ်ငန်းတွင် ကာလရှည်ကြာစွာ အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းစာရင်းများကို ထည့်သွင်းရန် Fixed Asset နှင့်သက်ဆိုင်သော Control Account များကိုဦးစွာထည့်သွင်းပေးရမည်။ Conntrol Account ထည့်သွင်းရန်အတွက်... Setting ကိုနှိပ်ပါ။ Control Accounts ကိုနှိပ်ပါ။ Fixed Asset ဘေးရှိ New Control Account ကိုနှိပ်ပါ။ "Name" တွင် ထည့်သွင်းလိုသော Asset Name ကိုထည့်သွင်းပါ။ "Code " တွင် ထားရှိလိုသော Code Number ကိုထည့်သွင်းပါ။ "Group" တွင် Asset Group ကိုရွေးချယ်ပါ။ Create ကိုနှိပ်ပါ။ ထည့်သွင်းထားသော Fixed Asset Control Account ကိုတွေ့ရမည်။ Fixed Assets များအတွက်… Continue reading Fixed Assets @ MSME Books
Control Account ထည့်သွင်းနည်း
Control Account ဆိုသည်မှာ ဥပမာ ။ ဘဏ်စာရင်းများ အား သီးသန့်ခွဲခြားသိလိုပါက ထိန်းချုပ်စာရင်းများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ MSME မှကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့် စာရင်းခေါင်းစဥ်များအား အသုံးပြုမည် ဆိုပါက သတ်မှတ်ရန်မလိုပါ။ စာရင်းသီးခြားပေါ်လိုသည့်စာရင်းများအား Control Account တွင်ထည့်သွင်းရမည်။ ဥပမာ-Bank acc အောက်တွင်ရှိသော Bank acc ခွဲများအားသီးသန့်ခွဲခြားလိုပါက Control Account ကိုအသုံးပြုရမည်။ Control Account အသုံးပြုရန်အတွက် Settings ကိုနှိပ်ပါ။ Control Accounts ကိုနှိပ်ပါ။ သီးခြားထားရှိနိုင်သည့်စာရင်းများမှာ -Bank Account / Cash Account / Customer(Account Receivable) / Suppliers (Account Payable) / Inventory Item /… Continue reading Control Account ထည့်သွင်းနည်း
Multi-currency @ MSME Books
April 6, 2020 April 24, 2020 BCN Support
လုပ်ငန်းတွင် Multicurrency ကိုအသုံးပြုမည်ဆိုပါက... Settings ကိုနှိပ်ပါ။ Base Currency နှင့် Foreign Currency ကိုတွေ့ရမည်။ လုပ်ငန်းတွင် ထားရှိလိုသော “အခြေခံငွေကြေး” ကို သတ်မှတ်ရန်... Base Currency ကိုနှိပ်ပါ။ “Code” တွင် ထားရှိလိုသော Code ကိုထည့်သွင်းပါ။ “Name” တွင် အသုံးပြုလိုသည့် Base Currency အမည်ကိုထည့်သွင်းပါ။ “Symbol” တွင် သတ်မှတ်လိုသည့် သင်္ကေတ ကိုထည့်သွင်းပါ။ “Decimal” တွင် ဒသမနောက်၌ ထားရှိလိုသော ဂဏန်းအရေအတွက်ကိုထည့်သွင်းပါ။ “Update” ကိုနှိပ်ပါ။ လုပ်ငန်းတွင် အခြေခံငွေကြေးအပြင် အခြားငွေကြေးကိုပါထပ်မံထည့်သွင်းသတ်မှတ်လိုပါက... “Foreign Currencies” ကိုနှိပ်ပါ။ “New Foreign Currency”ကိုနှိပ်ပါ။ “Code” တွင် ထားရှိလိုသော… Continue reading Multi-currency @ MSME Books
Opening Balance များထည့်သွင်းရန်လုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်ဆင့် @MSMEBooks
January 27, 2020 January 27, 2020 BCN Support
လက်ရှိလည်ပါတ်နေသော လုပ်ငန်းများ အခြား ကွန်ပျူတာ စနစ်တစ်ခု မှ သို့ မဟုတ် လက်ရေးစာရင်းကိုင်စနစ်မှ MSME Books သို့ပြောင်းလဲ အသုံးပြုလိုသည့်အခါတွင် လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့်စနစ်ကို စာရင်းပိတ်ပြီး လက်ကျန်ရှင်းတမ်း(Balance Sheet) ကို MSME Books အတွင်းသို့ထည့်သွင်းရပါမည်။ ထိုသို့ထည့်သွင်းရာတွင် လုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ Base Currency Chart of Account Bank Account Cash Account Customer Supplier Inventory Item Non-Inventory Item Fixed Assets Intangible Assets Capital Exchange Rate Opening Balance Excel မာတိကာ #BCN #CloudBasedAccountingSoftware #MSMEBooks #09977160671… Continue reading Opening Balance များထည့်သွင်းရန်လုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်ဆင့် @MSMEBooks